John Wooden oo loo xiray dilka Imaam Soomaali ah | KEYDMEDIA ENGLISH
John Wooden oo loo xiray dilka Imaam Soomaali ah
John Wooden, ayaa loo xiray, inuu dilay bishii December ee sanadkii hore, Maxamed Xasan Aadan, oo ahaa Sheekh Soomaali ah oo degganaa Columbus, Ohio.
COLUMBUS – Booliska magaalada Columbus ee dalka Mareykanka, ayaa gacanta ku dhigay nin ay sheegeen in uu mas’uul ka ahaa dil bishii December ee sanadkii hore loo geystay AUN, imaam Maxamed Xasan Adam oo ka mid ahaa tiirarka bulshada Soomaaliyeed ee Ohio.
John Wooden, oo 46 jir ah, kana soo jeeda magaalada Franklinton, ayaa lagu soo oogay dacwad dil ah oo la xariirta dhimashadii 24-kii bishii December, ee Sheekh Maxamed Xasan oo 48 jir ahaa, sida laga soo xigtay diiwaannada maxkamadda Franklin.
Imaam, Maxamed, oo ay noloshiisa ugu war danbeysay, 22 December, ayaa labo cisho kadib meydkiisa oo rasaas badan ku taallo laga helay gaari uu watay, oo yaalla Windsor Avenue ee dhanka Waqooyi ee magaalada.
AUN, Maxamed Xasan, ayaa imaam ka ahaa Masjidka Abu Hurayrah ee dhanka Waqooyi Bari ee magaalada, wuxuu geeridiisa ka hor u baxay inuu cunuggiisa ka soo qaado xarun lagu xanaaneeyo oo ku taal Oakland Park Avenue.
Eedeysane, Wooden, wuxuu hore u soo maray xabsiga Franklin, ka hor inta aan xabsiga federaalka laga sii deyn bishii Maarso 2021, waxaana xabsiga mar kale la dhigay, dhawaan kadib markii lagu tuhmay dilka Sheekh Aadam.
Booliiska Columbus ayaa la filayaa in maanta oo jimca ah, ay soo saaraan tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan baaritaanka Wooden, kaas oo lagu eedeeyay inuu dilay hoggaamiyihii Masjidka Abu Hurayrah ee Columbus.